Mon Petit Avatar: Ambiguity
Posted by Mon Petit Avatar at 1:07 AM
Oh... Take care of yourself, sis. Maybe you should collect like instant noodle packets, biscuits, drinking water etc, it's just my suggestion. Hope everything will be back to normal soon. Don't be upset, sis. Smile :)!
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ မွန်လေး
အော် ထိုင်းမှာလား။ ကျမ္မာရေးလည်း ဂရုစိုက်ပါ။ အစားနှင့် ရေတွေ နိုင်သလောက်စုပြီး၊ သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏကို စား။ ပြီး သတင်းတွေ နားထောင်။ ခုအားတုံး ဘုရားစာတွေလည်း ရွတ်နေပေါ့ကွယ်။ သတင်းနှင့် အညီ ကိုယ်ဘာလုပ်ရလဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်တာပေါ့။ ကျမ္မာပါစေ လို့ ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်။
ရေလွှမ်းတာ မွန်တို့နေရာရောပါလား...စိတ်ပူလိုက်တာ...။ မေးချင်နေတာ ခုတလောလိုင်းကမကောင်းလို့ ...။
အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေလို့ ..
ဘန်ကောက်မြို့ကြီး ဗင်းနစ်မြို့ဖြစ်ဆိုကတည်းက မမွန်ကို သတိရနေတာ..အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့...
Thank you all my friends for your support, and suggestions (which means so much to me )!!!